Deeggarsaafi mormii bulchiinsa MM Abiy irratti Waashingitan DC'tti taasifame - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright VOA AMHARIC
Goodayyaa suuraa Mormitoota bulchiinsa MM Abiy hiriira irratti mul'atan keessaa
Yunaayitid Isteet magaalaa Waashingitan DC Imbaasii Itoophiyaa achi argamu fuula duratti guyyaa kaleessaa hiriirri bulchiinsa MM Abiy deeggaruufi mormu taasifame.
Hiriirri akkanaa booda kana keessumaa ajjeechaan qondaaltota Naannoo Amaaraafi qondaaltota waraanaa magaalaa Finfinnee irratti raawwate booda kan mul'achuu eegale.
Hiriira walfakkaataa torban muraasa dura magaalaalee US biroo fi magaalota Awurooppaa biroo keessatti mula'tee ture.
Mormiin akkanaa kuni imala yeroo duraaf MM Abiy hoggantoota kaan waliin gara Ameerikaa taasisuun diyaaspooraa yero hedduu mootummaa qeequun beekamu waliin 'riqicha ijaaruuf' yaalii taasisuun milkaa'aniin booda kan duraati.
Daawwannaa MM Dr. Abiy Ameerikaa keessaa maal argatan?
Hiriira tibbanaa garuu wanti adda taasisu, gara caalu, hiriirri mormiifi deeggarsaa wal biratti mul'achaa jiraachuu isaati.
Ameerikaatti Ambaasaaddar Itoophiyaa kan ta'an Obbo Fitsum Araggaa fuula tiwitara isaanii irratti barreessaniin 'Hundii keessan gara Imbaasii keessanitti dhuftanii yaada keessan waan ibsitanif galatoomaa,'' jedhaniiru.
Itti gaafatamtuu Waldaa Tirasti Fandii Diyaasporaa Naannoo Waashingtan Kan taate Aadde Biraanee Beekaa Galatoo namootni Abiyyiin deeggaruuf bahan, ''Abiy nama jaalalaati malee gaggeessaa nama ajjeesu miti jechuun dhaadannoo dhageessisaa turuu,'' BBC'tti himte.
Abiy biyya duguuggaa sanyii irraa oolche malee hin ajjeesu jechuun namoota Abiy saba Amaaraa ajjeesaa jira jedhaniif deebii kennaa gamaa gamana dhaabbachuun dubbataa akka turan BBC'tti himte.
Aadde Biraaneen akka jettetti namootni Abiyyiin mormuuf bahan Jeneraal Asaamminaw Tsiggee goota jechuun ibsaa turan jechuun himti.
Kanneen MM Abiyyiin deeggaran ammoo Asaamminaw yakkamaadha, gaggeesitoota biyyaa nama ajeesisedha jechuun sagalee isaanii dhaggeesisaa turuu dubbate.
Dhiigni Ambachew Mokonnin fi dhiigni jeneraalota ajjeefamanii dhiiga keenya akkasumas yakkamtootni seeratti dhiyaachuu qabu jechuun kanneen Abiyyiin deeggaraa turan akka dhaadataa turanis himteetti.
Gama biraan ammo, kanneen bulchiinsa MM morman magaalli Finfinnee kan hunda keenyaati, waanti faayidaa addaa Oromiyaa jedhamu jiraachuu hin qabu jechaa turuutu gabaafame.
Gareen ''Mana Maree Baalaadaraa'' jedhamuu fi Iskindir Naggaan hogganamu aangoo argachuu qaba jechuun dhaadataa turuu isaanii Aadde Birhaaneen BBCtti himte.
Boodarra garuu aadde Birhaaneen hiriira irratti ammaas sababni isaa hin beekamneen poolisiin yeroo qabaman viidiyoowwan agarsiisan mul'ataa turan. Ergasii gadhiifamuutu dhagahame.
Namni biraa hiriira mormii irra ture tokko BBCtti akka himetti namootni seeran ala hidhaman haa hiikaman, mootummaan gaaffii ummataa haa dhaggeeffatu jenneeti sagalee keenya dhaggeesisuuf baane jedhe.
Hidhamtootni siyaasaa jiraachuu hin qaban, gaazexesitotnis hidhamuu hin qaban jechuun waan biyyatti tahaa jiru mormuuf baane jedha.
Hundii keessan gara Imbaasii keessanitti dhuftanii yaada keessan waan ibsitanif galatoomaa
Obbo Fitsum Araggaa, Ameerikaatti Ambaasaaddara Itoophiyaa
Akka yaada isaatti bulchiinsa MM Abiy mormuuf qofa osoo hin taane ol aantummaan seeraa haa kabajamu ejjennoo jedhu qabna jedha.
Ajjeechaa naannoo Amaaraatti raawwates tahe Jeneraalota irratti raawwate qaamni walaba tahe qorachuu qaba yaada jedhu qabna jedhe.
Hanga qaamni walaba tahe qoratee adda baasutti namootni shakkaman to'atamuu hin qabanii gaaffii jedhuuf, nuyi shakkamaan maaliif hidhama hin jennu.
Gaggeessaa biyyasaa fayyisuuf waadaa seene
Yoo shakkiidhaan qabamanis sa'aatii 48 keessatti seeratti dhiyaachuu qabu. ''Amma garuu kun tahaa hin jiru,'' jedhan.
Kanneen garee 'Mana Maree Baalaadaraa' jedhun of waaman seera biyyaa cabasaniiru jedhee akka hin yaadne dubbatan.
Obbo Fitsum Araggaa hiriira lamaaniifu kanneen dhufan galateeffachuun ''walamantee cimsuuf, hubannoo fi tokkummaa cimsuuf hojjechuu itti fufna,'' jedhaniiru.
Daawwannaa MM Dr. Abiy Ameerikaa keessaa maal argattan?